8NM प्रक्रियामा आधारित! सामसुले G जी आरएफ चिप टेक्नोलोजी विकास पूरा गर्यो - YIC International International Co |तपाईंको इन्टरजेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आपूर्तिकर्ता |www।YIC-Electronics.com
घर > समाचार > 8NM प्रक्रियामा आधारित! सामसुले G जी आरएफ चिप टेक्नोलोजी विकास पूरा गर्यो
8NM प्रक्रियामा आधारित! सामसुले G जी आरएफ चिप टेक्नोलोजी विकास पूरा गर्यो
सामसु Eg इलेक्ट्रोनिक्सले भर्खरै भने कि यसले new NM प्रक्रियाको आधारमा भर्खरको आरएफ टेक्नोलोजीको विकास गरेको छ। 14NM प्रक्रियाको तुलनामा सामसुको GB सेफ प्रक्रियाले आरएफ चिप क्षेत्र 35 35% ले कम गर्न सक्दछ र procked 35% ले वृद्धि गर्दछ।
कोरियाली मिडियाका अनुसार एसीसी रिपोर्टका अनुसार सामसु E ले भविष्यमा बहु-च्यानल र बहु-एन्टेना एकीकरणलाई सहयोग पुर्याउँछ। सामसुले भने कि चिपले उपन-6GHZ र मिलिमिटर छालहरू समर्थन गर्दछ। नयाँ प्रक्रियाले सैमसंगको लागि अधिक OEM अर्डरहरू जित्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बजार अनुसन्धान फर्म स्टेशनफोर्सबाट डाटाका अनुसार सामसु's को संस्थापक व्यवसायको पहिलो क्वाटरमा 1 17% को विश्वव्यापी बजार शेयर थियो, र यो अझै पनि त्मीसीको% 55% पछाडि छ।
दक्षिण कोरियाली कम्पनीले 201 2015 मा आरएफ चिप भण्डार सेवाहरू प्रदान गर्न थाले, सुरुमा228nm प्रक्रियाको प्रयोग गरेर, र 201 Janal मा 14NM उत्पादन प्रक्रिया प्रदान गर्न शुरू भयो। सामसु's ले भने कि 201 2017 देखि कम्पनीले 50000 मिलियन भन्दा बढी मोबाइल रेडियो आवृत्ति चिप्स पठाएको छ।